Nhau - Nheyo yemucheka wekudzivirira huswa
Nheyo yemucheka unopikisa uswa
Iyo anti-uswa jira rakagadzirwa nedema uye girini epurasitiki flat sirika yakarukwa nemazino akabatanidzwa uye anti-ultraviolet basa. Inogona kunyatsovhara chiedza chezuva kune masora pasi pemucheka we-anti-uswa, kuitira kuti masora arege kuita photosynthesis, uye ozodzivisa kukura kwemasora; Chimiro chakagadzikana chemucheka we-anti-uswa chinodzivirira midzi yemiti kubva pakuchera kubva pasi, inodzivirira midzi yemiti, uye inodzivirira zvipembenene nemhuka duku kubva pakukuvadza zvinomera; Anti uswa jira permeability zvakanaka, kuitira kuti mudzi wemhepo ane imwe liquidity, mvura seepage nokukurumidza, anogona panguva kuchenesa mvura pedyo mudzi chirimwa, kudzivirira mudzi chirimwa pedantic.
Anti-uswa jira chigadzirwa chitsva chakagadzirwa munguva dzazvino, chinonyanya kugadzirwa nepolypropylene kana polyester faibha semidziyo yakabikwa, kutora chikamu mune mamwe maajenti anobatsira, asiri muchetura, asiri-anopisa-anotsigira, anoita kuti basa rayo rigadzikane. Inoda kugadziriswa, kugadzirwa mumabhegi, ane yakanakisa uv resistance, corrosion resistance, kusadzikisira uye zvimwe zvakakosha. Inogona kushandiswa zvakanyanya mumapurojekiti ekushongedza, sekugadzirisa mugodhi, kushongedza kwerwizi, kunakisa rwizi, kunakisa mugwagwa mukuru uye zvichingodaro. Hune ukoshi hukuru hunoshanda.
Kubvisa sora reOrchard, kuvarimi ibasa rinorwadza, kuneta zvekuti utange kusakura, kuhaya vanhu kwete mihoro shoma. Kuverengera kwe ecological uswa jira rinogona kupamhama NongYou troubleshoot, ecology anti uswa machira anogadzirwa asiri akarukwa machira akagadzirwa muzvinhu zvekuchengetedza kwezvakatipoteredza, Europe neUnited States nedzimwe nyika dzakabudirira dzave mukushandisa ecological uswa jira, rine mabhenefiti ari pachena. : 1, mhepo permeable, yakanakisa basa remvura rinogona kushandisa mvura soluble fetiraiza ShangFei zvakananga, uye anogona nenguva nenzira kuchenesa mvura pasi, kusimbirira pasi yakachena. Kupinda kwemhepo kwakanaka kunogona kuomerera kune yakajairika kufema kwevhu, hazvizokonzerese kuti zvirimwa zvipise midzi. 2, isina-chepfu isingakuvadzi, inogona kuderedzwa: haina simbi inorema uye zvimwe zvinhu zvinokuvadza, haizochetura ivhu. Uyewo maererano nekushandiswa kwenguva yekuwedzera anti-aging agent kugadzirisa kunogona kunonoka nguva yekuora, kuderedza kushandiswa kwemari.
Heavy Duty Weed Barrier, Mvura Inopindira uye Inofema Weeding Mucheka, Biodegradable Weed Control Fabric, Pp Woven, Kusakura Mumucheka, Weed Control Fabric Roll,